Ngokuhamba kwesikhathi wonke umsebenzisi Inthanethi kuba kudingekile ukushintsha ikhodi - kusuka ku-akhawunti yakho ye-e-mail, i-akhawunti e ukuxhumana nomphakathi, Skype noma ICQ. Okubuhlungu nakakhulu le nkinga ngaphambi abasebenzisi ezimnandi zakudala ICQ-isithunywa. Empeleni indlela ushintshe iphasiwedi yakho ku-ICQ, sizokwenza manje nixoxe.
Esanda kutholakala ushintshe iphasiwedi yakho ku-ICQ ngokuqondile ICQ-iklayenti yayingasekho nhlobo indlela yokubaleka. Siyethemba ukuthi umnikazi omusha isevisi ICQ Mail.ru Iqembu esikhathini esizayo kuyoba abaqotho xaxa okunye ICQ amaklayenti bese ubuyela abasebenzisi ukushintsha iphasiwedi ngokuqondile ICQ iklayenti. Okwamanje, ukwenza le nqubo kungenzeka kuphela esemthethweni ICQ isisetshenziswa indawo.
Ungase ube izizathu eziningana ezahlukene ukushintsha iphasiwedi:
Imbangela ezivame kakhulu - umuntu umane ukhohlwe iphasiwedi ukuze ICQ. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka uma iphasiwedi yakho bekulokhu kunzima kakhulu futhi olukhohlisayo. Ngokuvamile, lokhu kwenzeka uma umsebenzisi-akhawunti amaningi kakhulu zokuxhumana nabantu kanye nezithunywa ahlukahlukene - akumangalisi ukuthi awukwazi ukhumbule iphasiwedi ku ICQ, futhi konke unesithakazelo okwamanje - kanjani ukushintsha iphasiwedi ICQ.
Uma usola noma ukwazi ngokuqinisekile ukuthi zaqoshwa futhi ezithumela ogaxekile kusuka ekamelweni lakho.
Uma uthenge ohlangothini ebusweni ekamelweni lakho bese ufuna uthole iphasiwedi entsha.
Uma iphasiwedi Kulula kakhulu, futhi udinga sibe yinkimbinkimbi ke.
Ngokushesha waxwayisa: ungatsheli muntu iphasiwedi yakho, futhi akakaze abe ICQ. Uma noma yiliphi isayithi uzokwaziswa ukuze ushintshe iphasiwedi yakho khona lapho - anikholwa. Lena isehlukaniso abavamile. Ufaka iphasiwedi uzobe esibhaliwe ifayela umbhalo futhi ithunyelwe kumnikazi wesayithi. Futhi ungenza nge lutho iphasiwedi.
Futhi manje ngihlale kabanzi sendlela ushintshe iphasiwedi yakho ku-ICQ kwi website esemthethweni isevisi. Ukuze wenze lokhu sidinga ukuya kwiwebhusayithi ICQ - abangamazi: www.icq.com.
Lokhu kuzothatha wena page main wesayithi lapho uzocelwa ukuba ungene ngemvume noma ukubhalisa. Ukuze ungene ku ngezindlela ezimbili:
faka inombolo izikhala ICQ nephasiwedi kuwo;
ugcwalise ikheli leposi le-elekhthronikhi, okuyinto bhalisiwe ICQ nephasiwedi kusukela ICQ.
Uma ungafuni ukufaka-kabusha imininingwane yakho yokungena enkonzweni, ungabheka ibhokisi elithi "Ngikhumbule".
Okubalulekile: ICQ kubasebenzisi mobile kukhona enye indlela ukufakazela ubuqiniso inkonzo ngokufaka inombolo yeselula ukuthi nakanjani ICQ-isithunywa.
Uma ukuqinisekiswa kuphumelela, ungakwazi dlulelani esinyathelweni esilandelayo. Ekhoneni eliphezulu kwesokudla uzobona amagama "Ukusekela ICQ», futhi ngaphansi kwalo - isixhumanisi "Shintsha iphasiwedi". Uyinto oludingayo, futhi ukushintsha iphasiwedi ICQ. Chofoza isixhumanisi. Lokhu kuvula ikhasi "Shintsha iphasiwedi" Amasimu ezingenalutho "Iphasiwedi yamanje:" "Iphasiwedi okusha" futhi "Iphasiwedi entsha (futhi)." Kulula: faka iphasiwedi endala futhi iphasiwedi entsha, chofoza "Londoloza". Zonke umsebenzi kwenziwa.
Futhi manje ukugxila kanjani ukushintsha iphasiwedi ICQ, lapho ungayikhumbuli iphasiwedi yakho. I algorithm okulandelayo lapha:
Iya website ICQ.
Ngesikhathi kwesokudla ngaphansi emagama latayelekile "Sekela ICQ ukuba" uzobona isixhumanisi "Ukhohlwe iphasiwedi?". Iya kuyo.
Uzothola ngokwakho ekhasini elithi "Iphasiwedi Lokubuyisela". Uzokwaziswa ukungena emasimini inombolo ICQ, ikheli le-imeyili noma inombolo yakho yeselula.
Ukuze afakazele wena awulona irobhothi, sicela ufake umazisi.
Chofoza amagama "eduze."
Zonke umsebenzi kwenziwa. Nge-imeyili noma kuselula yakho uzothola i-imeyili yokuqinisekisa. Odinga ukukwenza - ulandele isixhumanisi ku-imeyili, khona-ke ungakwazi ukushintsha iphasiwedi ICQ.
Empeleni, yilokho kuphela. Uma inqubo iphasiwedi ishintsha kuphumelela, uhlelo azokwazisa ngami lokhu athandwayo umyalezo "Iphasiwedi ishintshwe ngempumelelo."
Hacking - Indlela Ongazivikela Ngayo
Kanjani ukwakha login nephasiwedi i-Skype
Ukukhetha Ummeli: Amathiphu Citizen
Leso siphuzo ne tequila? Indlela baphuze tequila?
Kamil Gadzhiev: umsubathi, umgqugquzeli, umholi
Indlela yokudaya izinwele.
Amashingili: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Onkulunkulu Slavic futhi amandla emvelo
Incwadi uma ikhuluma ngebitume emulsion futhi ukukhiqiza eliphezulu yayo